Nei maNews eZvinhu zveTwitter ASI ANOGONESESA Game
Svondo, July 8, 2012 China, June 18, 2015 Andrew K Kirk
Twitter ina zvakaziviswa seti yezvinhu zvitsva zvinowedzera zvese zvekutsvaga uye zvekuwanikwa maficha. Iwe unogona ikozvino kutsvaga uye uratidzwe inoenderana maTweets, zvinyorwa, maakaunzi, mifananidzo uye mavhidhiyo. Idzi ndidzo shanduko:
Zviperengo: Kana ukatadza kuperetera izwi, Twitter inozozviratidzira zvawanikwa pamubvunzo wako.
Mazano akafanana: Kana iwe ukatsvaga musoro wenyaya uyo vanhu vanoshandisa akawanda mazwi, Twitter ichapa akakodzera mazano emazita akafanana
Mhedzisiro ine mazita chaiwo uye mazita evashandisi: Paunotsvaga zita rakaita sa'Jeremy Lin, 'iwe uchaona mhedzisiro inotaura zita remunhu iyeye uye yavo Twitter account rezita.
Zvabuda kubva kuvanhu vaunotevera: Pamusoro pekuona 'Zvese' kana 'Zvepamusoro' maTweets ekutsvaga kwako, iwe unogona zvakare kuona maTweets nezvehurukuro yakapihwa kubva kune chete vanhu vaunotevera.
Ndichiri kushamisika neinjiniya kuyedza, ini handifanoona zvitsva zveTwitter & Kutsvaga zveTwitter semuchinjisi wemutambo nekuda kwezvikonzero zviviri:
1.Twitter Updates paMind-Inopenya Yekumhanya
Mazuva ese, kune mamirioni miriyoni eakaundi maTwitter akagadzirwa uye mamirioni zana nemakumi mairi nemashanu eTweets anotumirwa! Uku kuyerera kweruzivo kwakanaka, asi hakuzvikweretese zvakanaka mukutsvaga nekutsvaga. Ini handingonyura muma tweets ezvimwe misoro; pachinzvimbo, ini ndinotsvaga anonakidza vanhu kuti vatevere.
2. Twitter Yakagadziriswa Kunze kwe Twitter.com
Chii chakaita kuti Twitter ibudirire mumakore ekutanga, ndeyekuti ruzivo rwacho runogona kugadzirwa, kugayiwa, uye kugovaniswa zvakasiyana zvachose kubva kuTwitter.com. Iyi yakasimba suite yeAPIs yakabatsira kukurudzira matani ekukura. Zvakanyanya kuoma sevatongi vepaTwitter kuyedza kudzosa vanhu kuTwitter.com, vanhu vakasununguka kushandisa nekuona maTweets pane mamwe mapato echitatu-bato. Nechikonzero ichocho, zveTwitter's Kutsvaga & Discovery maficha hazvionekwe nevazhinji vanorema vashandisi.
Imwe bakoat, injinjini pa Twitter ndiani arikutungamira, Pankaj Gupta ane tarenda zvakanyanya; akaramba zvakapihwa kubva kuGoogle neFacebook kuti ashande pa Twitter. Iye akangwara zvakakwana kundiratidza kuti ndakanganisa.
Kufara kubvuma kupihwa kubva @Twitter (ndine hurombo @google uye @Facebook, Ndinokudai varume, asi @Twitter ndipo pandichave ndiri…)
Unofungei? Izvi zvinhu zvitsva zvichave chinja mutambo weiyo twitter? Siya zvaunofunga uye zvirevo pazasi.
Tags: Social Media MarketingTwittertwitter kuwanikwatwitter kutsvaga
Jul 8, 2012 na3: 32 PM
Nguva dzose zvinonakidza kunyora uye kugovana newe mose. Kutenda kune rese reKushambadzira Tech Blog timu!
Jul 9, 2012 pa 4: 45 AM
Twitter pachayo inoshandura mutambo, isu tese tinoishandisa nenzira dzakasiyana uye tichiri kuyedza kugadzirisa kugona, sezvazviri chaizvo Twitter pachavo. Chero chipi chinowedzerwa kune yakashata yekutsvaga sarudzo inogamuchirwa. Zvakanaka kutaura pamusoro penyaya iyi saka ndinozvigamuchira izvozvo, Thanks Paul
Jul 9, 2012 na2: 10 PM
@ twitter-205666332: disqus Tinotenda nekuda kwemashoko ako! Twitter mutambo wekuchinja; hazvishamise zvinorehwa nemakumi mana nematanhatu hunhu hunogadziridzwa kune ese magariro uye epamhepo nyika.
Ini ndinofunga iwe uchaona zvakanyanya uye nekuwedzera, Twitter ichiedza kutyaira kwakawanda kushanda kubva pane zviripo maficha, zvinopesana nekugadzira zvimwe zvinhu.